Ellicott Dredger wuxuu ka caawiyaa Dekadda Palermo-Columbia - Ellicott Dredges
Ellicott Dredger wuxuu ka caawiyaa Dekadda Palermo ee Kolombiya
Gaaritaanka dekedaha ayaa muhiim u ah soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha adduunka. Marka taraafikada ay gaabiso sababtuna tahay wasakhda iyo dib u dhis kale, Diidmada Ellicott waa xalka.
An Ellicott 670-42 Dragon® Dredge ayaa la iibsaday oo hadda loo isticmaalay in lagu weeciyo Deler Palermo Port ee Magdalena Waaxda Kolombiya.
Coremar Group, milkiilayaasha Palermo Port Cluster iyo Retramar (hawlwadeenada dekada), waxay amar ku bixiyeen oo ay heleen qulqulka si ay u fuliyaan qulqulka webiga ee dhismaha iyo dayactirka marinada warshadaha.
Dredgers-ka waxaa loo adeegsaday waqtiyadii hore si loo ilaaliyo qabyada dekeda. Si kastaba ha noqotee, nooca Ellicott 670 dredge wuxuu leeyahay cabbir dhan 42-foot (13.5 mitir), oo ka weyn midka caadiga ah ee 36-cagood (11 mitir). Sababtaas awgeed, Coremar wuxuu yareyn karaa inta jeer ee wax ku biirinta cusub ee Ellicott dredge.
Jorge Castellanos, Madaxweynaha Castec - oo iibiyey ceelkii oo wakiil u ahaa Ellicott ee Kolombiya muddo labaatan sano ah - ayaa sheegay in milkiileyaasha dekeddu ay caadi ahaan kireystaan ​​qashin markii loo baahdo, laakiin lahaanshaha midda ayaa hubinaysa in maraakiibtooda markasta ay ku jiraan xaalad sare.
Dekadaha Kolombiya ayaa koraya waana inay helaan oo keenaan maraakiib alaabo badan leh, kana imanaya dalal kala duwan, ayuu yidhi. "Qabyo-qabadyada dekedooda ayaa ah mas'uuliyadooda taas oo macnaheedu yahay inay caadiyan tahay inay kiraystaan ​​lacag dhimis si ay u xalliyaan xaaladdan."
Dekadaha kale ee ku xeeran Palermo waxay leeyihiin dhibaatooyin la mid ah dhismaha wasakhda, iyo Dragon® Dredge ayaa loo arkaa xalka suurta galka ah ee arrimahaas sidoo kale.
"Lahaanshaha kalsoonidooda gaarka ah waxay dammaanad ka qaadayaan in (milkiilayaasha dekeddu) ay joogteyn karaan waardiyahooda, oo hadda sumcadda wanaagsan ee Ellicott Dredges ay ka shaqeyso dekedooda, waxay fursad weyn u helaan xallinta dhibaatada," Castellanos ayaa sidaas yidhi. "Qaar ka mid ah milkiilayaasha dekadaha kale ayaa noo soo dhowaanaya, iyaga oo raadinaya qiyaastii 670-42 dredger ee Delermo Port."